ဘရာစီယာမဝတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဆံပင်ညှပ်ပေးသည့်နောက် ဆံပင်ညှပ်မယ့်ယောင်္ကျားလေးများ အလှည့်ကျတန်းစီနေရသည့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် – Shwe Nay Chi
ဘရာစီယာမဝတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဆံပင်ညှပ်ပေးသည့်နောက် ဆံပင်ညှပ်မယ့်ယောင်္ကျားလေးများ အလှည့်ကျတန်းစီနေရသည့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်
ယနေ့ခေတ်တွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်သောအခါ သူများထက်တမူထူးခြားစေသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်မှသာ ရောင်းအားပိုကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်​။ ဖောက်သည်တွေရဲ့အကြိုက်တွေကိုအသုံးချပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါက အလွန်ရောင်းကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ယောက်ကျားလေးတွေအတွက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကိုဖွင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ပုံမှန်ရက်တွေမှာ ဆိုင်ကိုလာသော ဖောက်သည်တွေသိပ်မရှိသဖြင့် အလုပ်ပါးနေပြီး အဆင်မပြေကာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ထို့နောက်သူမသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အကြံညဏ်နဲ့ ဘရာစီယာမဝတ်ပဲ ဆံပင်ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်စမ်းသပ်ပြီးနောက် ထိုဝန်ဆောင်မှု ရရှိတဲ့အကြောင်းတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်သို့ ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ နောက်မနက်မှာ ဆံပင်လာညှပ်သည့်ယောက်ကျားလေးများသည် ဆိုင်ရှေ့မှာအများကြီးရောက်ရှိလာပြီး သူမဟာအလွန်အံ့ဩသွားပါတယ်။ သူမသည် သူ့ရဲ့ဖောက်သည်ကို ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာ ဒီလောပ်ထိ လူတွေကြိုက်လိမ့်မယ့်လို့ မထင်ခဲ့ဘူးဟုဆိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူမကြော်ငြာထားသော Post လည်း လူအများက ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာတွေမေးနေတဲ့ Comments တွေကိုပဲ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ ယခုဆိုရင် ထိုဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သည် နေ့တိုင်းဖောက်သည်များ ပြည့်နေသောကြောင့် အလုပ်အကူဝန်ထမ်း ထပ်ခေါ်လိုက်ရတယ်ဟုသိရပါတယ်။
ယေန႔ေခတ္ေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ေသာအခါ သူမ်ားထက္တမူထူးျခားေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္မွသာ ေရာင္းအားပိုေကာင္းမွာပဲျဖစ္ပါတယ္​။ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕အႀကိဳက္ေတြကိုအသုံးခ်ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါက အလြန္ေရာင္းေကာင္းမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံက မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေယာက္က်ားေလးေတြအတြက္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ကိုဖြင္းၿပီးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ ပုံမွန္ရက္ေတြမွာ ဆိုင္ကိုလာေသာ ေဖာက္သည္ေတြသိပ္မရွိသျဖင့္ အလုပ္ပါးေနၿပီး အဆင္မေျပကာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ထို႔ေနာက္သူမသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕အႀကံညဏ္နဲ႔ ဘရာစီယာမဝတ္ပဲ ဆံပင္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိတဲ့အေၾကာင္းေတြကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္မနက္မွာ ဆံပင္လာညႇပ္သည့္ေယာက္က်ားေလးမ်ားသည္ ဆိုင္ေရွ႕မွာအမ်ားႀကီးေရာက္ရွိလာၿပီး သူမဟာအလြန္အံ့ဩသြားပါတယ္။ သူမသည္ သူ႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ကို ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ဒီေလာပ္ထိ လူေတြႀကိဳက္လိမ့္မယ့္လို႔ မထင္ခဲ့ဘူးဟုဆိုပါတယ္။
အြန္လိုင္းေပၚမွာ သူမေၾကာ္ျငာထားေသာ Post လည္း လူအမ်ားက ဆိုင္ရဲ႕လိပ္စာေတြေမးေနတဲ့ Comments ေတြကိုပဲ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ထိုဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္သည္ ေန႔တိုင္းေဖာက္သည္မ်ား ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကူဝန္ထမ္း ထပ္ေခၚလိုက္ရတယ္ဟုသိရပါတယ္။
“ဒီရေ တက်ခြင်း ကျခြင်း အကြောင်း” (ဒီရေတက်/ကျချိန်ကို သိမှ ရေကြောင်းခရီး အန္တရာယ်ကင်းမည်)
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့see more…